Jaamacadaha Somaliland maxaa u sababa in uu hoos u dhac ku yimaado?(Hadhwanaagnews) Saturday, July 14, 2012 anigooo ku bilaaabayaaa qoraalkayga ama maqaalkayga alaha weyn , waxaaan ugu horeynba salaamayaaa bahda sharafta lehee anigooo ku bilaaabayaaa qoraalkayga ama maqaalkayga alaha weyn , waxaaan ugu horeynba salaamayaaa bahda sharafta lehee shabaka daha war baahinta .
Marka xiga waxaan wax yaroo kooban ka dhehi doonaaa jaamacadaha Somaliland oo maanta aad moodaysoba baray fatyo yar yar oo meel walba laga furanaaayo.
Waxaaa qarnigan aynu maanta ku jirto soo kordhay waxbarasho badan gaar ahaaan schools dawladu leedahay iyo mid gaaraba.
Jaamacadaha wadanka ayaa iyana aan meesha ka maqnayn oo ayno odhan karnaa maanta iyagaaba ka fudud schools ka hore ama sare si yaroo sahlana loo heli karaa, ama loo dhigan karaaa.
Somaliland waxaa ka furan jaamacado badan waxaana hoos u dhac weyni ku yimi qiimihii ay lahaan jirtay jaamacadi , waayo waxay noqdeen kuwa jeebkooda u shaqays tayaaala waxaynu aragnaa arday aan wax horeba soo dhigan oo hadana jaamacad dhiganaaya waxaynu aragnaaa arday dugsi sare dhiganaaya oo hadana dhinacna ka dhiganaaya jaamacad waana wax aynu odhan karno way xagal daacisay waxbarashadii soomaaliland.
Jamacadi waxay lahaan jirtay qiime, sharaf ,waxbarasho, jaamadu waxaa geli jirey oo keliya arday soo dhamaysatay waxbarshada dugsiyada sare weliba waxbarashadiisu ay sarayso.
Wasaaarada waxbarashadu waa halka ugu sareysa ee laga maamulo marka laga yimaado madexweynaha wadanka waxbarashada dugsiyada iyo jaamcadaha waxaanad moodaaa inay wasaaradu aanay waxba ka soo qaadayn ba jaamcadahan qiimihii ay lahaan jireena uu hoos u dhacday.
Waxaan ku soo koobayaa qoraalkayga jaamacaduhu waa halka arday badan oo dugsiyada sare ku jiraa ku hamiyayaan waxayna ku noqonaysaa niyad jab weyn waayo arday waxsoo baranaayey mudo badan iyo arday jaamad uun ka soo fuulay salaanka isma qabanayaan, waxaanan leeyahay way dihin tahay waxbarashadeenuye yaan la biyo dhicin.
Jaamacaduhuna sidan wax hayskula dhaamaan .
c/rixiin maxed cali ubaxle ********************************************************